यसै सातादेखि राहत चेक पाउन सक्ने – BRTNepal
काठमाडौं: १३:११ | Colorodo: 01:26
यसै सातादेखि राहत चेक पाउन सक्ने
बिआरटिनेपाल संवाददाता, न्यु योर्क । २०७७ फागुन २९ गते ९:२७ मा प्रकाशित
ह्वाइट हाउस सेक्रेटरी जेन साकीले केही करदाताले छिटोमा यही सप्ताहन्तदेखि राहत चेक पाउन सक्ने बताए । उनले बिहीबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उक्त कुरा बताएका हुन् ।
राहत चेक १ दशमलव ९ ट्रिलियन डलरको अमेरिकन रेस्क्यू प्लान (एआरपी) अन्तर्गत प्राप्त हुन लागेको हो जसलाई राष्ट्रपति जो बाइडेनले बिहीबारै हस्ताक्षर गरी कानुन बनाइदिएका छन् । कोरोना भाइरसको महामारीबाट राहत दिन ल्याइएको उक्त एआरपीले अनइम्प्लोइमेन्ट इन्सुरेन्स बेनेफिटको अवधि पनि लम्ब्याइदिएको छ । साथै, एआरपीमा चाइल्ड ट्याक्स क्रेडिट लगायतका थुप्रै उदार व्यवस्था छ ।
इन्टरनल रेभेन्यू सर्भिसले करदाताको खातामा राहत चेक बापतको रकम सोझै जम्मा गरिदिने छ । इन्टरनल रेभेन्युसँग ब्याङ्कसम्बन्धी विवरण भएका अमेरिकीले सबैभन्दा पहिला राहत चेक प्राप्त गर्नेछन् । इन्टरनल रेभेन्युसँग ब्याङ्कसम्बन्धी विवरण नभएका अमेरिकीले भने राहत चेकका लागि केही समय पर्खिनुपर्ने छ । उनीहरूले पेपर चेक वा प्रिपेड डेबिट कार्डमार्फत राहत चेक र त्यसबापतको रकम प्राप्त गर्नेछन् ।
पहिला राहत चेक वितरण यो महिनाको अन्तसम्म सुरु गरिने बताइएको थियो । तर, यसअघि दुई पटक करदाताको खातामा सोझै जम्मा गरिएकाले इन्टरनल रेभेन्यू सर्भिसेसले यस पटक राहत चेक तत्काल खातामा पठाउन सक्ने जनाइएको छ ।
वार्षिक आय ७५ हजार डलरभन्दा कम भएका व्यक्तिले १ हजार ४ सय डलर र वार्षिक आय १ लाख ५० हजार अमेरिकी डलरभन्दा कम भएका दम्पतीले २ हजार ८ सय डलरको राहत चेक प्राप्त गर्नेछन् । करदाताले प्रति डिपेन्डेन्ट थप १ हजार ४ सय डलरको राहत चेक पाउने छन् । राहत चेक सन् २०१९ र २०२० का दाखिला गरेको करको आधारमा प्रदान गरिने छ ।
बिआरटिनेपाल संवाददाता, न्यु योर्क ।का अरू रचना
स्वास्थ समाचार :खोप लाएकाले मास्क लाउन नपर्ने
विश्व समाचार :बढी आय भएकालाई पनि राहत चेक दिन प्रस्ताव, बालबालिकालाई ३६ सय डलर
विश्व समाचार :ट्रम्पलाई फर्किन दिइनु हुँदैन
ईमिग्रेसन :अमेरिकाबाट विदेशी विद्यार्थी फर्काइने
अमेरिका समाचार :टिपिएसमा रहेका आप्रवासीलाई फिर्ता नपठाउन अदालतको आदेश
एनआरएनए अमेरिकाको अध्यक्षमा तिलक केसीले उम्मेदवारी दर्ता
एनआरएनए अमेरिकाको निर्वाचनका लागि आइसिसी सदस्य पदका लागि नारायण कँडेलले उम्मेदवारी दर्ता
गीतकार बुद्धवीर लामाको १० औं एकल साँझ अमेरिकाको ह्यारिस बर्गमा हुने
एनआरएनए एनसीसी अमेरिका:५ जना अध्यक्षका उम्मेदवार, अरू पदमा को को छन्?
आर्थर गन (दिवेश) फेरि अमेरिकन आइडलमा, निर्णायकको मन जिते
ए एन ए मा डा. शर्मा, डा. अधिकारी पछि बोर्ड अफ ट्रस्टीको नेतृत्व सम्हाल्दै डा. शम्भु ढुङ्गाना
एनआरएन अमेरिका:अध्यक्षका उम्मेदवार सुबेदीको छैटौँ कार्यक्रम केन्टकीमा
अमेरिकाको न्यूजर्सीमा जन्मिएकी प्राप्ति नेपाली भाषा सिकाउँदै (भिडियो सहित )
गिरिजा प्रसाद कोइराला फाउन्डेसन अमेरिका च्याप्टरको नॅंया कार्यसमिति